Iwe: Mụbaa arụpụta ọrụ, Mmekọrịta, na Mmekọrịta Ọdịnaya Gị | Martech Zone
Amaghị m ihe anyị ga-enwe ike ime na-enweghị a mmekota n'elu ikpo okwu maka mmepụta ọdịnaya anyị. Ka anyị na-arụ ọrụ na infographics, akwụkwọ ọcha, na ọbụlagodi blọgụ, usoro anyị na-esite n'aka ndị nyocha, ndị edemede, ndị na-emepụta ihe, ndị editọ na ndị ahịa anyị. Nke ahụ bụ nnọọ ọtụtụ ndị metụtara itinyefe faịlụ na azụ n'etiti Google Docs, DropBox ma ọ bụ email. Anyị chọrọ usoro na nsụgharị iji mee ka ọganihu na-aga n'ihu n'ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu.
Adaba Ewubere kpọmkwem maka mmekorita ọdịnaya - na-arụ ọrụ dị ka etiti etiti iji jikwaa akụ na ụba mmadụ yana ijikọ na akụrụngwa mpụga gị. Atụmatụ ahụ gụnyere:
Ọrụ Ọrụ - Hazie ihe niile ịchọrọ iji mezue ọrụ gị n'otu ebe. Kewaa nnukwu ebumnuche gị n'ime mpempe akwụkwọ ga - ejikọ, tinye faịlụ ma setịpụ ụbọchị kwesịrị. Ngwa ngwa soro mmụba niile na onyinye mmadụ n'otu n'otu.
Communication - @ kwuputara ndị otu ị chọrọ ka arụ ọrụ ma ha ga-ahụ ozi gị ozugbo na ebe ọrụ ha. I nwekwara ike ịgụnye ndị ọrụ si na mpụga ụlọ ọrụ gị.
Arụ Ọrụ Email - Site na ịpị otu ị gbanwere email ka ọ bụrụ ọrụ wee zipu ya na Wrike maka ime ihe.
Dashboards - Mepụta echiche ndị a na-ahụ anya banyere ọrụ kachasị mkpa nke gụnyere eserese, ọnọdụ ihe aga-eme, na mmelite oge.
Akwukwo ozi - Mmelite na ọrụ niile na-arụ ọrụ na-enye ọkwa ọkwa ozugbo ma belata nzukọ na nkwukọrịta email na ọkara ka ị wee nwee ike ilekwasị anya n'ihe dị mkpa.
Otu edezi - Dezie, kesaa ma rụkọta ọrụ na dọkụmentị na ntanetị na oge yana ndị otu gị.
Njikwa nnweta - Inye ọkwa ziri ezi nke njikwa nnweta, imepụta otu ndị ọrụ ahaziri iche na iji kesaa faịlụ na-eme ka ndị mmadụ ziri ezi na-enweta ozi ha chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Omenala Workflows - Mee ka usoro gị dị ọhụrụ ma nweta ọhụhụ n'ime ọrụ na ọkwa nke ọ bụla. Mepụta usoro aka gi jiri usoro nnabata.
Ubi Omenala - Tinye mpaghara nke aka gị na oru ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ma soro ihe dị mkpa maka azụmaahịa gị.
Nchịkwa Management - Balance resources na soro arụmọrụ site na a ọkụ ala chaatị.
Oge nyocha - Na-edekọ etu otu oge si emefu ma ọ bụ ndị otu ga-eji oge na nhazi ego.
Kalinda njikota - Mekọrịta ọrụ na akara ngosi oru ngo na ihe ọ bụla kalenda gụnyere Kalịnda Google, Kalịnda Outlook, na iCalendar.
Ngwa ngwa ngwa - Adaba nwere ma ihe eji eme gam akporo na Ngwa iOS ka ị nwee ike ịdebe ma rụọ ọrụ ọbụlagodi mgbe ị na-apụ na tebụl gị.
Advancega n’ihu n’ịrụpụta ọrụ gị, ị nwere ike ibipụta otu oru ngo, na-e copomi ihe aga-eme e kenyere gị na ụbọchị.
Wrike na-enyekwa njikọta na ngwa Google, Chrome, Dropbox, Igbe, Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive, SAML, Salesforce, iCal, Zapier, Evernote, Wufoo, HipChat, WordPress, Slack (nke anyị hụrụ n'anya), Zendesk, Hubspot, Akwụkwọ ọsọ ọsọ, LinkedIn, Marketo, ProofHQ, Owuwe ihe ubi, SurveyMonkey, Okta, na Bitium!
Banye maka a nnwale efu na iku
Naanị ihe edetu - anyị na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: bidiumBoxchromemmekorita ọdịnayammepụta ọdịnayaọrụ ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaDropboxEvernotengwa ngwa googleowuwe ihe ubiHipchatokpokorodị egwuLinkedInahịaMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveMicrosoft ProjectoktaproofqAkwụkwọ ngwa ngwandị ahịaSAMLslackSurveyMonkeyWordPressWrikewuoikeOnyebuchi